Thenga iTadalafil powder Manufacturer & factory
Akukho kalo SKU: 171596-29-5. Udidi: Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASRAW inamandla okuvelisa ubuninzi be-Tadalafil powder, i-1800kg ngenyanga.
I-Tadalafil powder, into eluhlaza ye-tadalafil, luhlobo lomgubo omhlophe, ihlala isetyenziselwa ukwenza iipilisi ze-tadalafil. Iziyobisi zeTadalafil, i-aslo ebizwa ngokuba yi-Cialis, yenye yeeklasi zamachiza abizwa ngokuba yi-PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Ukwabelana ngesondo ngeTadalafil / i-Cialis ibuyisa izihlunu zemithambo yegazi kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi kwiindawo ezithile zomzimba. I-Tadalafil / i-Cialis kunye nezinye i-PDE-5 inhibitors zinokunceda amadoda ane-erectile dysfunction (ED) ngokwandisa impendulo ye-erectile xa indoda ivuselelwa ngokwesondo. Isetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ukungabi namandla) kunye neempawu ze-benign prostatic hypertrophy (eyandisiweyo yeprostate). Ngokuqhelekileyo abantu bathenga i-tadalafil powder kwi-purity ephezulu ye-tadalafil. Ngaphandle kweTadalafil / Cialis, amanye amachiza akweli klasi yiViagra (Sildenafil) kunye neLevitra (Vardenafil), kunye neFlibanserin.
Inqaku elibalulekileyo: I-Cialis akufuneki ithathwe nge-nitrate ngenxa yokukwazi kwayo ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Ama-nitrate akufuneki athathwe ubuncinci iiyure ze-48 ngaphambi kokuba i-Cialis isebenzise uninzi lwabasebenzisi be-nitrate abafuna ukuyiphepha le kunye nayo yonke i-PED5's.
Isicelo seTadalafil powder sokuthengisa
Kwivenkile ekuthengiswa kuyo iziyobisi, okanye esibhedlele, sinokubona ngokulula i-cialis, eyi-tadalafil. Ewe, le tadalafil powder -esona sicelo siqhelekileyo senziwa ichiza kunyango lwe-ED, ihlala ikwimo yeepilisi okanye iipilisi, ukongeza koku, enyanisweni, i-tadalafil ikwasetyenziswa ngamanye amaxesha, :
I-Tadalafil inokongezwa kwiilekese ukwenza iilekese eziqhelekileyo ukuphucula iimfuno zamadoda zesondo. Zininzi kakhulu iintlobo zeelekese zesini eMalaysia, izinto eziphambili zihlala zi-tadalafil powder, kunye ne-sildenafil powder.
Kithina, ngamanye amaxesha ukuze sibe neziphumo ezinamandla okanye iimpembelelo ezibuthathaka, sinokwenza ikofu yokwabelana ngesondo ngokunyusa isampulu ye-tadalafil, ngokweemfuno zabathengi zokwenza imilinganiselo eyahlukeneyo yekofu.